किन युवतीहरु चाहन्छन्, केटाले नै प्रेम प्रस्ताव राखुन् ( यस्तो छ कारण ) | Rochak
September 20, 2021 NepstokLeaveaComment on किन युवतीहरु चाहन्छन्, केटाले नै प्रेम प्रस्ताव राखुन् ( यस्तो छ कारण )
समयसँगै अहिलेको युवापुस्तामा धेरै परिवर्तन आइरहेको छ । तर पनि केही पुराना मान्यताहरुलाई छोड्न सक्दैनौं। कुनै स’म्बन्धको लागि पहल पु’रुषले नै गर्नुपर्ने किन। हामी आफ्नो विचारमा त धेरै अगाडि निस्किएका छौं तर, कैयौं मामिलामा अहिले पनि हामी पछाडि छौं । युवतीहरुले युवकहरुसँग स’म्बन्धको सुरुवात गर्ने आशा गर्नुको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ।
अस्विकारको डर युवतीहरुको सबैभन्दा ठूलो डर हो रिजेक्सन् । सामान्यरुपमा महिलाहरु पुरुषले आफ्नो प्रेम प्रस्तावलाई अस्विकार गरिदिए भने के होला भन्ने सोच्छन् । उनीहरुको मनमा यो कुराको डर हमेसा हुन्छ । ‘उसमा मलाई कुनै रुची छैन । म त्यो स्थितीको सामना कसरी गर्न सक्छु। अरु मानिसहरुलाई यो कुरा थाहा भयो भने उनीहरुले मेरो बारेमा के सोच्नेछन्।
यस खालका धेरै प्रश्नहरु छन् जुन उनीहरुको दिमागमा दौडिरहेको हुन्छ । यसै डरको कारणले उनीहरु जुन युवकलाई मनपराउँछ उनीहरुलाई डे’टको प्रस्ताव गर्न हच्किन्छन् र आँफैलाई रोक्छन् ।
उसले मेरो बारेमा के सोच्नेछ महिलाहरुलाई आफूलाई कसैले मुल्यांकन गरेको मन पर्दैन । यही कारण उनीहरु पुरुषलाई प्रस्ताव गर्दैनन् । अरुले आफ्नोको बारेमा के सोच्नेछन् भन्ने डरको कारण आँफैलाई रोक्छन् । यो ‘असुरक्षाको भावना नै उनीहरुको आ’त्मविश्वासमा भारी पर्छ । कुनै पनि महिला यो कुरामा डराउँछन् ।
उनीहयुवकले यो त मेरो टाइपकी युवती होइनन् कि भन्ने सोच्छन् कि भनेर चिन्तित रहन्छन् । महिलाहरुको मनमा सँधै पु’रुष र आसपासका मानिसहरुले आफूलाई मुल्याङ्कन गर्ने भय हुन्छ ।
अरुसँग स’म्बन्धमा पो छ कि युवतीहरु विभिन्न खालका सवालहरुलाई आँफै उल्झाउँछन् । आफूले चाहेको पु’रुष पहिलेदेखि नै अरुसँग स’म्बन्धमा छन् कि भन्ने डरले उनीहरुको अगाडिको कदमलाई रोक्छ । उनीहरुलाई त्यो स’म्बन्धको सुरुवातको बारेमा सोध्न पनि सक्दैनन् र यसै डरले पछाडि हट्छन् ।
हरेक मामिलामा युवकलाई अब्बल पाउँछन्
महिलाहरु केहि गर्न भन्दा पहिले त्यससँग जोडिएका रिस्कको बारेमा पनि हिसाब गर्छन् । यहि काम उनले कुनै पुरुषलाई अप्रोच गर्नभन्दा पहिले पनि गर्छिन् । यदि उनीहरुले आफूले चाहेको युवकलाई हरेक मामिलामा राम्रो पाएमा आँफै पछाडि हट्छन् । उनीहरुको यो सोचले नै उनीहरुलाई आफ्नो मनको कुरा भन्न रोक्छ ।
पर्सनालिटी राम्रो छैन अहिलेको समयमा कसैसँग पनि यति धेरै समय हुँदैन कि उनीहरुले पर्सनालिटी राम्रो नभएका कुनै व्यक्तिसँग डिल गरुन् । यस्ता व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्न मानिसहरुले धेरै रुची राख्दैनन् । महिलाहरुको मनमा पनि यो कुरा गढेको हुन्छ । त्यसैले कैयौं पटक उनीहरु मात्रै व्यक्तिको बाहिरी आ’कर्षणबाट प्रभावित हुँदा हुँदै पनि स्वभावको कारण पहिले अप्रोच गर्दैनन् ।
उनीहरुको मनमा उसको लुक राम्रो भए पनि उसको पर्सनालिटीले बिल्कुल अलग भयो भने के गर्ने भन्ने सवाल दैडिरहन्छ । अनलाईन खबर बाट।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुलाई सङ्क्रमण वढ्दो , उच्च जोखिम देखियो
सेल्फी लिने लतले गुम्यो चर्चित मोडलको ज्यान, फ्यानहरु शोकमा..?
July 16, 2021 Nepstok
पिपलको पूजा गर्दा हुन्छ यस्तो चामत्कारिक लाभ!
October 2, 2021 Nepstok
बेला-बेलामा मरेका मानिस सपनामा देखिन्छन् ? हुनसक्छ यस्तो संकेत